जहाँका सबै मानिस जमीन भित्र बस्छन्, कारण यस्तो रोचक ! - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
जहाँका सबै मानिस जमीन भित्र बस्छन्, कारण यस्तो रोचक !
भोटाहिटीमा रहेको अण्डरग्रउण्डको पसल त तपाईले देख्नुभएको नै छ । त्यहाँ धेरै पसलहरु रहेका छन् । त्यहाँ सडकमुनि मात्र दिउँसो नै पसल राखिन्छ । तर संसारमा यस्तो पनि स्थान छ, जहाँका सबै मानिस जमीन मुनि बस्दछन् । यो गाउँको नाम कूबर पेडी रहेको छ । र यो दक्षिण अष्ट्रेलियामा छ ।
त्यहाँका सबै मानिस जमीन भित्र बनाइएका घरमा बस्छन् । बाहिरबाट हेर्दा यी घर साधारण लाग्छन् तर त्यहाँका सुखसुविधा जे चाह्यो त्यहि छ । कूबर पेडी क्षेत्रमा ओपलका केही धेरै खानी छन् । ओपलको खानीमै उनीहरु बस्छन् ।
तपाईलाई लाग्यो होला यो ओपल के हो ? ओपल एक दुध रङको बहुमूल्य पत्थर हो । कुबर पेडीलाई विश्वमा संसारको ओपल राजधानीको रुपमा पनि चिनिन्छ । किनभने यो क्षेत्रमा संसारकै सबैभन्दा धेरै ओपल खानी छ । मिडिया रिपोर्ट्सका अनुसार कुबर पेडीमा माइनिङको काम १९१५ मा शुरु भएको थियो । त्यो एक मरुभूमि इलाका हो ।
जसका कारण त्यहाँ धेरै गर्मी हुन्छ । त्यस्तै जाडोमा धेरै जाडो हुन्छ । जसका कारण त्यहाँ बस्ने मानिसलाई धेरै गाह्रो हुन्छ । त्यसैले मानिसहरु जमीन मुनि नै बस्छन् । अहिले त्यहाँ १५ सय भन्दा धेरै घरहरु रहेका छन् । जमीन मुनि बनेका यी घरमा धेरै सुखसुविधा छ । यो क्षेत्रमा केही हलिउड फिल्म पनि शूटिङ भएका थिए ।
वर्ष २००० मा फिल्म पिच ब्ल्याकको शूटिङ प्रोडक्शनले फिल्ममा प्रयोग गरेको स्पेसशिप त्यहिँ छोडेको थियो । जो अहिले पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ ।